Central Operation Staff (CCR) -Nga Zun Township | De Heus Myanmar Co., Ltd
*အစီအစဥ်အလိုက် ထုတ်လုပ်ရေး တာ၀န်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
*ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များအား တိတိကျကျ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
*လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးမပြုမီ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ခြင်းရှိနေကြောင်း အာမခံရမည်။
*စနစ်များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ကြောင်း စစ်ဆေးနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဥ်များအား ကွပ်ကဲနေရမည်။
*လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မူမမှန်ဖြစ်ရပ်များရှိပါက သတိပြုမိရမည်။
*မိမိကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်သော မူမမှန်ဖြစ်စဥ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်သို့ ချက်ချင်းအစီစဥ်ခံရမည်။
*စံနှုန်းအလိုက် ထုတ်လုပ်ရေး Batch များအား စစ်ဆေး ထိန်းညှိရမည်။
*စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းအလိုက် စက်ရုံနှင့် စက်ကရိယာများအား သေသေချာချာ သန့်ရှင်းရမည်။
*ထုတ်လုပ်ရေးမစတင်ခင် ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုများ ပြင်ဆင်ရမည်။
*မှတ်စုများမှတ်သားထားပီး ထုတ်လုပ်ရေး အဆိုင်းခေါင်းဆောင်အားနေ့စဥ် Operation အစီရင်ခံစာအား ပို့ပေးရမည်။
*ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် လုပ်ဆောင့်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါ၀င်ရမည်။
*ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ယဥ်ကျေးမှုအား တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာရမည်။
*သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်မှ ချမှတ်ပေးထားသော တာ၀န်များ၊ extrusion machine၊ tablet press machine များအား မောင်းနှင်ခြင်းလုပ်ကိုင်ရမည်။
*Bachelor’s degree in mechanical engineer, electrical, machine operation and vocational Degree or Above.
*တိရစ္ဆာန်အစာ၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ၊ ငါးစာထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူများအား ဦးစားပေးမည်။
*ထုတ်လုပ်ရေးစက်ကိရိယာများ လည်ပတ်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃)နှစ် ရှိရမည်။
* Operation machine certificate ရှိပါက ဦးစားပေးမည်။
Could you work Nga Zun Township?
How many years of experience do you have relating this position?